Kuchinja Hupenyu - chikamu chaOakleigh muVana Vanoda Dambudziko. - Chikoro che Oakleigh uye Iyo Yekutanga makore Kupindira Center
Mushure meChikoro Kirabhu
Acorn Kuongorora Center
EYSEND Yakaremara Advisory Chikwata
Ruzivo rweVabereki neVatariri
Tsigiro pa Nursery
Vhidhiyo Workshop Kudzidziswa Kwevabereki
PsTT Live Zvirongwa
Mapoka Okutsigira Emunharaunda
Nyika Dzinotsigira Masangano
PIT Tsigiro Magwaro Main Menyu
Barnet Makore Ekutanga SENCO Toolkit
PIT Covid-19 Tsigiro
PIT Vhidhiyo Zviwanikwa
PIT Kudzidziswa Kumbira Kunyorera Fomu
PIT Mhinduro Fomu
Zvikumbiro uye ruzivo
Kudya Kwechikoro Kwemahara uye Mudzidzi Wepamusoro
Chikwata Chekutsigira Mhuri
Kurapa & Nursing
Mutemo Wekudzivirira Vana
Akaenzana Mikana Policy
Chikoro Chekumba Kudyidzana Sisitimu
Mudzidzi Premium Policy
Remote Kudzidza Mutemo
SEND Ruzivo Ruzivo
Mitambo Yekutanga Yekuita Zvirongwa
Mitambo Yekutanga Yekuita Chirongwa 2021-22
Mitambo Yekutanga Yekuita Chirongwa 2020-21 Yakaongororwa
Vashandi Kodhi yeMufambiro uye Staff Complaints Policy
Barnet Yemunharaunda Inopa
Mabasa & Services
Matoyi & Zvishandiso
Mahara ICT Zviwanikwa kubva kuLGfL
Chikoro Administrator vacancy paOakleigh School
Kuchinja Hupenyu - chikamu chaOakleigh muVana Vanoda Dambudziko.
ne: Gabriella Czifra
Yakabudiswa: 16 November 2020
Musi wa13 Mbudzi, ndakasvika pachikoro pedu nemufaro uye kuda kuziva uye handina kumirira kutanga chiitiko chedu cheKutama Kubatsira vana Vanoshaya.
Dingindira guru uye kutarisisa kweVana Vanodikanwa vegore rino kwaive kusimudzira nekusimudzira hutano nekutsvaga uye Nzira shanu dzeWebhubebe munyika yese.
Isu hatina kufanira kufunga zvakawandisa kuti tifunge kuti isu, munhu wese pano pa Oakleigh taida kutora chikamu muchiitiko ichi. Kubatana, kushingaira, kugona kudzidza; kubatsira vamwe uye kucherechedza - dzese idzi nzira shanu dzakakosha zvakanyanya kune vese vana nemhuri dzavo uye nekwedu tese, vashandi veOakleigh.
Zvaive zvinodziya moyo kuona vazhinji vedu, vakuru-vakuru vakapfeka yellow uye vakafukidzwa nemavara. Vana vakasvika mune dzakasiyana shades dzeyero, madota uye makwapa akafukidza nhunzi uye kumeso zvaionekwa kwese kwese.
Chaizvoizvo pa10 o'clock, isu takatanga yedu Get Moving uye Grooving Zoom chikamu chakachengetwa neYellow Class uye nekufema kwatakave nako. Makirasi mazhinji nevana vakabatana nesu uye pakati pechipiri kukiyiwa kwenyika kana tichifanira kugara pamwe nemuviri kure - chaive chipo chakadii kuti ubatanidzwe kuyera uye kugovana nguva dzekunakidzwa, kushingaira pamwe chete. Kuona maitiro evana kana vachiona dzimwe shamwari dzavo mune imwe kirasi uye vogovana chinguva pamwe chete - ndinonzwa isu takanyatsogadzira dzimwe nguva dzemashiripiti pakati pekuparadzana.
Vana vakatamba uye vakatama uye vakagwinha uye isu takaunganidza mari inokwana kuita £ 43.60 iyo yakaita kuti nyika ifungidzirwe pamamiriyoni makumi mana nemana emamiriyoni.
Ndainzwa kudada, ndaidada kutora chikamu uye kufambisa uye nekutsigira vana vedu kuti vave 'shanduko yaunoda kuona munyika'.
Takamutsiridza nzvimbo yekutamba yechikoro!
2022 Oakleigh Chikoro & Iyo Yekutanga Makore Center